कसरी प्रभावित गर्न एक फ्रान्सेली केटी: कदम (तस्वीर) - डेटिङ फ्रान्सेली बालिका
हरेक संस्कृति यसको आफ्नै के के गर्न र के छैन को विवाहपूर्वको । के छलफल हुन सक्छ रोमान्टिक मा एक संस्कृति हुन सक्छ सजिलै देख्न रूपमा मा अर्को । मा दिन को अन्त मा, यो तल आउँछ के यो व्यक्तिगत रूपमा देख्नुहुन्छ उपयुक्त (वा छैन), तर यो चोट छैन एक सानो टुक्रा सिक्न बारे संस्कृति को व्यक्ति तपाईं फैंसी । यदि त्यो व्यक्ति एक फ्रान्सेली केटी, यहाँ केही उपयोगी सुझावहरु.
सिर्जना गर्न, यस लेखमा स्वयंसेवक लेखक काम सम्पादन गर्न सुधार र यो समय छ । यो लेख पनि भएको देखी, पटक हो । हरेक संस्कृति यसको आफ्नै के के गर्न र के छैन को विवाहपूर्वको । के छलफल हुन सक्छ रोमान्टिक मा एक संस्कृति हुन सक्छ सजिलै देख्न रूपमा मा अर्को । मा दिन को अन्त मा, यो तल आउँछ के यो व्यक्तिगत रूपमा देख्नुहुन्छ उपयुक्त (वा छैन), तर यो चोट छैन सिक्न बारेमा एक सानो बिट को संस्कृति व्यक्ति तपाईं फैंसी । यदि त्यो व्यक्ति एक फ्रान्सेली केटी, यहाँ केही उपयोगी सुझावहरु.
अमेरिकी, अलग्गै को विशेषताहरु त्यसैले भनिन्छ ‘बदसूरत अमेरिकी’ यस्तो भइरहेको चर्को, किनभने कुराहरू फरक छन्, घर र लुगा पनि
पोशाक एक सानो भन्दा सामान्य छ । आकस्मिक पोशाक (पुष्ट जूता, बेसबल टोपी, मनोरञ्जन, टी-शर्ट, जीन्स, वा शर्ट्स) छैन रूपमा साधारण मा फ्रान्स । फ्रान्सेली केटी जस्तै तपाईं शायद छैन जस्तै लुगा त्यो बस ओछ्यानमा बाहिर लुढकाया वा देखि फिर्ता मिल्यो जिम. न गर्नुपर्छ । छैन, आपनै प्रशंसा गर्नु गुमाउन, आफ्नो स्वभाव, तर्क ठूलो आफ्नो साथीहरू संग, वा केहि ध्यान आकर्षित गर्न अन्य फ्रान्सेली मान्छे गरिरहेको छ । फ्रान्सेली साधारण एक धेरै सहिष्णु मान्छे । रूढिवादी राजनीतिक र धार्मिक दृश्य, यो बुझ्न फ्रान्सेली केटी छ संभावना छ, एक अधिक उदार दृष्टिकोण । रही मा एक तर्क मा बाटो कुराहरू ‘हुनुपर्छ’ एउटा सजिलो बाटो मार्न रोमान्स । हुन तयार गर्न भन्न एक फ्रान्सेली पत्रकार जसले दिनांक महिला दुवै पक्षलाई एटलान्टिक भनेर जोगाइराखेको महिला केही संस्कृति मा (विशेष गरी अमेरिकी) एक अधिक ‘संविदात्मक’ दृष्टिकोण गर्न डेटिङ, मा तिनीहरूले चाहनुहुन्छ के थाह को स्थिति को सम्बन्ध, कहाँ गइरहेको छ, आदि.
तपाईं पाउन सक्छ भनेर फ्रान्सेली बालिका छैनन् मा को रूपमा धेरै जल्दी परिभाषित गर्न सम्बन्ध र हुन सक्छ शांत र भन्दा तपाईं गर्न प्रयोग गरिन्छ
भने यो एक आश्चर्य गर्न, तपाईं यो गर्न मदत गर्न सक्छ पढ्नुहोस् लेखक को बारे एक पुस्तक कसरी फ्रान्सेली महिला मिति पालन कि, तिनीहरूले उपयुक्त थाह रही एक मानिस मा खाने दल र लिएर हिँड्नुभएको, बरु भन्दा एक औपचारिक मिति जो अधिक जस्तै महसुस एक काम साक्षात्कार ।
← वेबसाइट मुक्त लागि डेटिङ बिना दर्ता
कसरी मान्छे प्रत्येक अन्य पूरा फ्रान्स →